Shiinaha:Baraha bulshada kaalin ayuu ka qaadanayaa furiinka - BBC News Somali
Shiinaha:Baraha bulshada kaalin ayuu ka qaadanayaa furiinka
Image caption Lamaane is furay
Wararka ka imaanaya Shiinaha ayaa sheegaya in sida aadka ah ee ay isku soo tareyso isticmaalka baraha bulshada, in dabcan ay suura gal tahay in kaalin weyn uu ka qaato furiinka oo aad ugu badanaya dalkaasi
Furiinka ayaa si tartiib ah ugu soo badanayay dalka Shiinaha tobankii sano ee u dambeeyay.
Wararka ayaa soo xiganaya quburo ku xeel dheer arrimaha furiinka, kuwaas oo sheegaya in lamaanayaasha Shiinaha ay muddo badan ku bixiyaan isticmaalka baraha bulshada, badalkii ay iyaga kaga wada hadli lahaayeen xaaladahooda qoys.
Waxa ay leeyihiin arrintaasi waxa ay dhaawici kartaa xiriirka, waxa ayna dadajin kartaa furiinka, waxa ay sheegeen in ay jiraan arrimo kale oo sabab u noqda furiinka.
Warbixin kale ayaa sheegeysa in ay jiraan furiina been ah.
Warbixin ayaa soo xiganaysa in lamaane is qaba oo doonayay in ay dagaan Beijing, si uu wiilkooda ugu biiro iskuul ku yaala magaladaasi, ayaa la sheegayaa in ay is fureen, haweeneydii ayaa guursatay nin dagan magaalada Beijing, kaddib waa ay iska furtay waxa ayna dib u guursatay ninkeedii koowaad.
Dadka qaar ee dalkaasi ku nool waxa ay ka hadleen baraha bulshada sida twitterka, iyo Weibo, iyaga oo sheegaya in aan loo eersan karin furiinka, waxa ayna sheegeen haddii dadka saacado ay ku bixiyaan baraha bulshada, in horayba ay u jireen dhibaato dhanka guurkooda ah.